July | 2012 | Somaliland Hargeisa City
IBRAAHIM MAYGAAG SAMATAR # 2
23 July, 2012 — somaliland1991
Daawo filimkan/video qiirada leh waxa uu dib inoogu celinaya wakhtigii halganka iyo qixii 1988
22 July, 2012 — somaliland1991
Daawo quruxda xeebta Berbera Beach
Daawo horumarku dalka Somaliland gaadhay waa film ka hadlaya wax soo saarka dalka
Daawo film ka hadlaya Somaliland
wasiirka waxbarashada somaliland shir jaraa´id ka hadashay wakhtiga la qabanyo imtixaanada
Daawo video-gan waa ruwaayad ka soo guura miyiga
21 July, 2012 — somaliland1991
Daawo video Garoonkii Burco oo la dhisayo
Somaliland bottles its hopes in Coca-Cola plant (The Guardian) news papper
guardian.co.uk, Friday 20 July 2012 11.22 BST
It is Africa‘s, if not the world’s, most isolated Coca-Cola bottling plant, a large shiny white-and-red hangar-like building in the middle of nowhere, with camels and black-headed sheep as neighbours.
halkan ka daawo waraysi tv:ga qaranku la yeeshay wasiirrka madaxtooyada, Xirsi Cali
5 July, 2012 — somaliland1991
Gulf Today Friday, June 29, 2012
Maansha Allaah; Alleylehe, shirkii Dubay guul baa lagala soo dheelmaday, mar haddii dawladdii Imaaraadku bayaamisay in caawimada ay bixiso si caddaalad ah ugu qaybin doonto Hargeysa iyo Xamar,
1 July, 2012 — somaliland1991
Last Modified: Sat 30th Jun,2012
Maansha Allaah; Alleylehe, shirkii Dubay guul baa lagala soo dheelmaday, mar haddii dawladdii Imaaraadku bayaamisay in caawimada ay bixiso si caddaalad ah ugu qaybin doonto Hargeysa iyo Xamar, welibana cilaaqaad fiican waa la isla soo guntay oo halkaas waxa ku baxay shuushkii ku dhex jiray Somaliland iyo Carabaha, sida xan hoose la iigu sheegayna ninkii Siilaanyo wuu ka naxsaday wadaadkii Shariif oo qaybta NACAM-ta ayuun baa shaqaynaysay, illeyn waa tii hore loo yidhi, ‘Nin gu’ kaa wayni, gu’ baas kaa wayne!’
Weger; Adeer, horta in la is horfadhiisto ma xuma, laakiin NACAM-ta aad sheegayso kala garan maayo inay ka sheekaynaysay midnimo iyo kala go,’ markaa wixii aan ka idhaaba waa igu deel-qaaf. Ta kale, miyaanad ogayn in aan qolyahan Khamiisyada cadcad ballantooda la aaminin oo haddaad heshiish la gasho sida khamiiskooda cad uskagu uga maydhmo ayuu maskaxdooda uga sifaysmaa haddii dawladaha reer galbeedku indho kulul ku eegaan, markaa isku hallayntoodu waa TAXDA EBER, wixii Ilaahay kaaga nixiyana waa halkiisa.
halkan ka daawo video kulankii madaxweynaha Somaliland ee Dubai
Halkan ka daawo video waraysi kulankii labada madaxweyne ee Somaliland iyo Somalia 28 juun 2012
Dalka Spain oo ku guulaystay horyaalkii kubada cagta ee Yurub 2012
Ciyaaryahaniinta xulka qaranka ee dalka Spain oo caawa 4-0 ku xuluuliyey xulka qaranka Talyaaniga. Talyaaniga oo semi finalkii ka soo badiyey dalka Jarmalka oo 2-0 kaga soo badiyey. Ciyaari waa gelin danbe. Hambalyo ayaanu leenahay dalka xulka qaranka dalka Spain, oo badisay markii 3 aad, 2008 ayey badiyeen koobkii Yurub, labo sanno ka dib 2010, ayey badiyeen koobkii kubada cagta adduunka, 2012 ayey ka badiyeen Talyaaniga. Waa markii ugu horreysay ee 2 goor oo isku xigta oo dal kaliya qaado waa Spain. Waa sharaf weyn ayey u tahay in ay difaacdaan koobkii ay ku badiyeen 4 sanno ka hor 2008. Waxyaalihii ugu weynaa ee dunnida ku soo kordha sannadkaa, 2008, waa dalka adduunka ugu awooda badan oo doortay madaxweyne madow, waa dalka Maraykanka, madaxweyne Barack Obama.
Ciyaaryahaniinta xulka qaranka dalka Spain, oo intooda badani u ciyaaraan naadiga dunnida uga caansan, Barcelona, uguna xariifsan xaga kubada cagta.
Tartankan ciyaaraha kubada cagta dalalka Yurub 2012 oo caawa laga daawanayey dacalada dunnida, oo Somaliland ka mid tahay.
Xulka kubada qaranka Spain, ayaa waxa ay soo bandhigeen ciyaar aad iyo aad u qurux badan, baaska gaagaaban, kubadu inta badan spain ay gacanta ugu ugu jirto oo ½ garoon ayaa lagula ciyaarayey xulka qaranka ee Talyaaniga.
Dhaliyayaashii goolasha caawa waxay kal aahaayeen ee u dhaliyey dalka, Spain,
David Silva, Alba, Tores iyo Mata.
Alba, oo goolkii 2 aad u dhaliyey xulka qaranka dalka Spain ayaa ah ciyaaryahanka ugu da´da yar ee xulka qaranka Spain, tiiyo da´diisuna tahay 23 jir, dhashayna 1989.
Waxaa ka maqnaa oo dhaawacnaa laba ciyaaryahan ee kala ah oo runtii midi dhexda ka ciyaaro midna difaaca oo kala ah.
Ruyol oo difaaca ka ciyaara iyo David Villa oo nr 7 u qaadta dalka Spain oo labadoodu dhaawac kaga maqnaa sidi ay ciyaaruhu u bilaabmeen. Labadooduba waxa ay caawa fadhiyeen taarabuunka. Sida aynu xaga hore ku soo sheegnay, ciyaaryahaniinta xulka kubada cagta ee spain waxay u badnaayeen ciyaaryahaniinta u ciyaara naadiga weyn ee Barcelona.
Waxaana ka mida
iyo qaar kale oo badan oo aanan halkan imminka magacyadooda ku soo wada koobi karin.
Madaamooy ay yihiin intooda badani ciyaaryahaniin u ciyaara isku naadi (Barcelona) waxay fududaysay in si habsami wanaagsan ay baaska iyo ciyaarta si fiican iskula qaadaan. Ciyaarta ay soo bandhigayeena ay ahayd tii looga bartay naadiga weyn ee Baecelona.
Ciyaartan kamadanbaysta ah ee Finalka oo lagu ciyaarayey caawa, caasimada dalka Yukrain ee Kiyev.
Waa markii ugu horreysay ee taariikhda lagu hayo ee horyaalka kubada cagta Yurub, ee dal laba goor oo isku xigta ay badiyaan koobkiina ay sidaa ku hantaan, sidaana ay ku qaadeenn koobka horyaalka kubada cagta mar 2 aad. Weligeed hore uma ay dhicin in uu dal (xul qaran) 3 goor ku guulaysto saddex horyaal. Waa markii ugu horreysay ee ay Spain si caadiya ay uga badiso dalka Talyaaniga, oo intii hore ee ay kulmeen aan kala badin ciyaarta caadiga ah 90 min socota, waxayse ku kala badiyeen rigoodheyaal. Laakiin ciyaar caadiya oo socdodta 90 min waa markii horreysay ee Spain ay 4-0 ku dhufato Talyaaniga. Dalka Spain oo muddadii u danbeysay ay ku habsatay dhaqaale xumo iyo shaqo laáan maalinba maalinta ka danbaysa sii kordhaysa. Ayaa xalay farriin u diray shacabkaas, taasoo ahayd, waynu ka bixi karnaa mushkilada dhaqaale xumo, hase yeeshee waxaa loo baahan yahay dedaal iyo karti. (sida xulka kubada qaran ee Spain ay ula yimaadeen dedaal iyo karti) Dad badan ayaa aaminsanaa in xulka kubada cagta qaranka Spain, aanay soo gaadhi doonin ciyaaraha kama dambaysta, dadkii sidaas lahaa xalay candhuuftooda ayey dib u liqeen.
Xulka kubada qaranka dalka Spain waxay xalay dhigeen taariikh aan hore u soo marin taariikhada kubada cagta ee Yurub. Waxay qoreen taariikh cusub.
waxaan filayaa in aniga iyo intii xalay dunnida dacaladiisa ka daawanayey ciyaartan quruxda badan in ay inagu reebi doonto xusuus lama ilaawaana
Hambalyo ayaanu leenahay haddanu nahay Somaliland1991.